WAR DEG DEG AH: Itoobiya oo wafdi wasiiro ah u soo dirtay Somaliland, maxayse ka wada hadlayaan? – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWAR DEG DEG AH: Itoobiya oo wafdi wasiiro ah u soo dirtay Somaliland, maxayse ka wada hadlayaan?
Wafdi ka socda dawladda Faderaalka ee dalka Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasumada maamulka Somaliland, halkaas oo ay wada hadalo kula leeyihiin madaxda maamulkaas, ayna kala hadlayaan iskaashiga labada dhinac iyo xiisadaha mandiqada ka aloosan.
Sidaas oo kale warar hoose ayaa sheegaya in laga wada hadlay sidii nabadda mandiqada loo ilaalin lahaa, gaar ahaana xiisadaha Tukaraq ayaa ka mid noqonaya arrimaha la soo qaadayo, maadaama horey ay labada dhinac uga wada hadleen.
Madaxweynaha Somaliland ayaa shaki galiyey heshiisyadaas, wuxuuna codsaday in lagu sameeyo dibu eegis balaaran oo ku aadan habka saami qeybsiga taas oo walaac galisay dawladda Itoobiya iyo DP WORLD oo horey heshiiskan uga wada hadlay, waxaana DP ay soo dirtay wafdigii ugu sareeyey oo todobaadkan joogay magaalada Hargeysa.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya shirarkan ka dhacay Aqalka Madaxtooyada ee magaalada Hargeysa, balse warar madax banaan ayaa sheegaya in ay suuragal tahay in ay wafdiga Itoobiya booqdaan dekeda magaalada Berbera ee ay la wareegtay DP WORLD.
54,152 total views, 2,039 views today
54,152 total views, 2,039 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
54,221 total views, 2,038 views today
54,221 total views, 2,038 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
54,233 total views, 2,039 views today
54,233 total views, 2,039 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
54,252 total views, 2,037 views today
54,252 total views, 2,037 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
54,294 total views, 2,041 views today
54,294 total views, 2,041 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]